DAAWO: Madhab-baa in ay Booliska Aduunka codsadeen in lagu wareejiyo Wasiirkii Amniga Jubbaland?
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay Hay’adda Booliska Aduunka ee INTERPOL ay codsatay in lagu soo wareejiyo kiiska Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo hadda ku jira xabsi ay maamusho dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Booliska Aduunku, waxay kaloo codsadeen in dacwadaha loo haysto wasiir Janan ay tahay laftirkiisu in uu helo xaqa u leeyahay in uu is difaaco, waxayna codsadeen in la horkeeno maxkamad ama lagu wareejiyo Booliska Aduunka.
Majiraan faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya, arrimahan marka laga reebo warkan oo laga soo xigtay saraakiil katirsan taliska sare ee Booliska Soomaaliya, waxaana aan wali cadeyn wajiga dhabta ah ee arrimahan.
Booliska Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay in uu xiran yahay Wasiir Janan oo ay ku haystaan dambiyo culus oo uu ka geystay Soomaaliya, waxaana shalay qaar kamid ah guddi howshaas ay u xilsaartay dawladda Faderaalku, ay sheegeen in xirnaanshihiisa ay tahay arrimo siyaasadeed oo uu ka dambeeyo Madaxweyne Farmaajo.
Waxba kama jiraan waxaas, Boliska aduunku wey ogyihiin somaliya Xaalada ayku jirto, Maxkamada caalamiyahina ka soconeyn, mana oran karaan, wax badan oo maxkamadaainlageeyo ubaahan baa jooga ee Barlamaanka ku jira maa la geeyo.?